बिना तैयारी पुर्नस्थापना ?
एकाएक शहरभरि चर्चा चल्यो, जबरजस्ती बिस्थापन गरिउको राजतन्त्र अव चाँडै नै पुर्नस्थापना हुँदैछ । हुन पनि जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप जबरजस्ती लादिएकोयगणतान्त्रिक संविधान र शासन बनेका सरकारबाट निराश भएका जनतालाई यो अष्पष्ट खबरमात्रले पनि धेरै नै उत्साहित तुल्यायो । खासगरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको वर्षौंसम्मको आन्तरिक र हालैको भारत भ्रमणको नतिजा अव चाँडै नै सकारात्मक परिणामका रुपमा आउँदैछ भन्नेमा कतिपय राजतन्त्रवादीहरु विश्वस्त छन् ।
पूर्वराजाका निकट रहेर काम गर्ने एक सहयोगीसमेत एउटा विदेशी पत्रिकामा छापिएको भन्दै एउटा अनलाइनले प्रकाशित गरेको पूर्वराजा, भारतका प्रधानमन्त्री र त्यत्ति नै बेला भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डानाल्ड ट्रम्पका वीच भेटवार्ता भन्ने खबरलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट प्रक्षेपण गरिदिएपछि धेरैले अव राजतन्त्र फर्कियो फर्कियो भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । तर पछि प्रष्टै थाहा भो, उक्त समाचार झूठो रहेछ । जेहोस्, पूर्वराजाको यसपटकको भारत भ्रमण पनि चर्चित रह्यो । त्यसो त
भारतका प्रम मोदी,लगायत अन्य बरिष्ठ एवम् महत्वपूर्ण नेताहरु भेटे नभेटेको कुरा यकिन नभए पनि समाचारमा आएअनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय कांग्रेस आईका नेता एवम् नेपालको तत्कालीन राजपरिवारसँग साइनोसमेत गाँसिएका डा.कर्ण सिंह, जो जनआन्दोलनहरुहरुसँग दरवारमा भएको समन्वयकारी भूमिकामा थिए, सँग भेटेर आफूले त्यतिबेलाको सबै शर्त र सम्झौालाई पालना गरेको तर बदलहरुले धोका दिएको भनेर गुनासो गरेको भन्ने समाचार आयो । हुन पनि कथित आन्दोलनको आयोजना गरिदा निरंकूश राजतन्त्रको अन्त्य भन्ने वाक्य राखिएको भएता पनि पछि कुनै पनि किसिमको राजतन्त्र स्वीकार गर्न नसकिने अवस्थामा त्यतिबेलाका प्रमुख दलहरु पुगे । फलतः अन्तरिम संविधानले निलम्बन मात्र गरेको राजतन्त्रलाई गणतन्त्र कार्यान्वयन र ०७२ को संधिानले पूर्ण रुपमा अन्त्य गरिदियो । देखिएकै छ, त्यसपछिका दिनहरुमा पूर्वराजा र राजतन्त्रवादीहरु अनेक उपाय लगाएर गुमेको साख र अधिकार लिनका लागि हरदम तत्पर छन् । अफसोस, अहिलेसम्म सफलता मिलेको छैन । एकथरि जानकारहरु भन्छन्– पूर्वराजाको स्थिति अहिले झन खस्किएको देखिन्छ । तिनका अनुसार आफूले छोरीलाई दाइजो दिएको छाउनीको घरजग्ग बलजफ्ती नेपाल ट्रष्टभन्ने बदनाम संस्थामा कानुनी उपाय लगाएर लगिदा पनि रोक्न नसक्नु कमजोरी भयो । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश, वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन््र शमशेरको फरक फरक दृष्टिकोण आउनु पनि पूर्वराजाको शक्ति ८ाीण भएको अनुभव हुँदैछ । अझ पूर्वराजालाई स्वागत र बिदाई गर्न जाने, जयजयकार गर्ने लर्को पनि कम हुँदै गएको देखिन्छ । यसअघि व्यापक समर्थन र जयजयकारको लोकप्रियता एकाएक कम किन भयो ? शासनव्यवस्था र पार्टीहरु व्यापक अलोकप्रिय भइरहेका बेलामा पूर्वराजावादीहरुको नौलो कार्यक्रम केही देखिन्न । राजनीतिक विफलतालाई क्यास गर्न पनि राजतन्त्रवादी असफल भए । स्वदेशीको समर्थन छ, विदेशीको गुहार लगाएरमात्र के गर्नु ? आन्तरिक तैयारी, गोलबन्द गर्ने नेतृत्व कतै देखिदैन । राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नेहरुले किन कुनै योजना ल्याएका छैनन् ? राजाका संवोधनहरुमा सबै जनतालाई मात्र जिम्मा दिने काम भएको छ । आफ्नो इच्छा, धारणा र कार्यक्रम जनतामा आउन सकेन । आमजनता रनभुल्लमा देखिन्छन् । शायद यहीकारण राजतन्त्रवादीहरु निराश हुनथालेका त होइनन् ? उत्साह भर्नेहरु उदासीन रहेपछि अपेक्षा गर्नेहरु निराश हुन्छन् नै ।
राजतन्त्र ल्याउने अभियान रनभुल्लमा छ । जतिसुकै दलहरु भ्रष्ट भए पनि कोठामा क्रान्तिकारी कुरा गरेर राजतन्त्र फर्किदैन । राजा आउ देश बचाउको नारा लागिरहेकै छ । नाराले मात्र कसरी पुर्नस्थापना हुन्छ । पूर्वराजाका सन्देश र भ्रमणले उत्साही बनाउँछ र आन्तरिक उत्साहमा विदेशी र खासगरी छिमेकी समर्थन प्राप्त हुने विश्वास दिलाउँछ । तर पछि पानीको फोकाजसरी तातेको स्थि िसेलाउँछ । राजा आउ भन्नेहरु भनिरहेका छन्, तिनले कुनै नयाँ कोर्स, योजना पाएका छैनन् । तैपनि विश्लेषकहरु भनिरहेका छन्– अव लामो समय कुर्नु पर्दैन । अहिले जुन बेथिति र बेहाल छ, त्यो अस्त्रले नै राजतन्त्रलाई पुर्नस्थापना गर्न बाध्य पार्नेछ । यसैवीच पूर्वपञ्चहरुको दुई राप्रपा एकीकरण भएका छन् । उनीहरुले घोषणा गरेका छन्– धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र ढाल्छौं । यो पनि गणतन्त्रको असफलताकै परिणति हो । असन्तुष्टि राज्यका सबै अंग र सञ्जालमा फैलिएका छन् । यसकारण पनि राजतन्त्रबिना नेपालको अस्तित्वको परिकल्पना परको विषय हुनथालेको छ । आन्तरिक तैयारी गर्न अवेर भइसकेको देखिन्छ ।